Daawo: Gabar Sheybaariiste soomaali ah oo lagu amaanay shaqada kahor tagista corona-virus. - NorSom News
Daawo: Gabar Sheybaariiste soomaali ah oo lagu amaanay shaqada kahor tagista corona-virus.
Boqolaal qof oo kamid ah dadka ka shaqeeyo arrimaah caafimaadka ayaa dowlada iyo waliba dadweynaha Norway kunool ku amaaneen shaqadii adkeyd oo ay qabteen intii lagu jiray la tacaalista xanuunka Covid-19.
Dadkaas waxaa kamid ah Muna Mohamed Abdi oo ah sheybaariiste soomaali ah oo kamid ahaa dadkii maalin walba saacadaha badan shaqeynayay, si ay u baaraan baaritaanada ay maraan dadka isaga shakiya xanuunka covid-19.
Muna ayaa u warantay NorSom News:
Previous articleDhageyso Sarsborg: Dhacdadii uu xalay ninka soomaaliga dadka ku laayay mindida.
Next articleMaxaa kusoo kordhay kiiska wiilkii soomaaligii ee dilka iyo dhaawaca ka geystay Sarsborg.